IIMPAHLA EZINGAMA-31 ZECHIC MAXI ZOKUNXIBA UMTSHATO - IFASHONI
Eyona Ifashoni Iimpahla ezingama-31 zeChic Maxi zokunxiba umtshato
Iimpahla ezingama-31 zeChic Maxi zokunxiba umtshato
Izambatho zeMaxi lukhetho olukhulu xa kuziwa ekuhlaleni isitayile kwaye ukhululekile kuwo nawuphi na umtshato oya kuwo. Bona ezinye zeelokhwe zethu esizithandayo apha.
Xa abantu becinga ngeengubo ezinkulu, imifanekiso ye-bohemian, i-flowy frocks ihlala ifika engqondweni-kodwa kukwakho iintlobo ngeentlobo ze-silhouettes kunye nokuhonjiswa okunokwenza iilokhwe ezinde kakhulu zenziwe ngakumbi, zisemthethweni okanye ngaphezulu kwayo nayiphi na into oyifunayo. Sifumene iilokhwe ezinkulu zemitshato ezisebenza kakuhle kwiminyhadala eyahlukeneyo, ukusuka kwimitshato yaselwandle ukuya kumaqela e-cocktail nakwimicimbi ye-tie emnyama. Sibheja ukuba uza kuyifumana isebenza ngokugqibeleleyo emtshatweni oya kuwo ngezantsi.
Kwi-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka nge-classic sweetheart neckline, le ngubo ye-maxi kwindwendwe yomtshato lukhetho olungenakusilela. Iza kubukhulu obuqhelekileyo kunye obuncinci.
UBadgley Mischka ingubo yesithandwa se-cobalt, ukusuka kwi- $ 70, RenttheRunway.com
Ukuya kuthi ga ngoku ngehlobo lomtshato weendwendwe zomtshato we-maxi, le nto ixhaphake kakhulu. Isiketi sayo esiqukuqelayo sinokubonwa emtshatweni wolwandle, kodwa ngaphezulu kwayo i-navy, inokusebenza ngokufanayo kumtshato wevenkile yokutyela.
UEliza J Isikhafu sejezi kunye ne-crepe de chine yokunxiba maxi, $ 158, Imvu.com
Ukusikwa esinqeni kubonisa ulusu oluncinci ngaphandle kokuveza kakhulu.
Hutch Isinxibo samaxi, $ 228, Anthropologie.com
Ifumaneka kuzo zombini kunye kunye nobukhulu obuthe tye, isinxibo se-maxi sondwendwe lomtshato ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka yindawo yokubonisa.
IModCloth Iingubo ze-ruffles maxi elwandle, ModCloth.com
Ngempembelelo ye-ombré epholileyo, i-maxi ehonjisiweyo ithatha i-bohemian vibe.
Abantu abaSimahla ilokhwe enkulu ye-maxi, $ 32, FreePeople.com
I-lace ebomvu ebomvu kunye ne-neckline ehamba phambili igcina ilingana nobushushu obushushu.
Indawo efanelekileyo yokufumana i-intanethi
I-BCBG UMax Azria Isinxibo se-mozaic lace maxi, $ 528, BCBG.com
Isiporho esirhabaxa kunye nentamo ephezulu inika imvakalelo yanamhlanje kwilokhwe yeklasi yeentyatyambo yeklasikhi yelokhwe yomtshato. Lo uya kujonga ngendlela emangalisayo kumgangatho wokudanisa.
UJay Godfrey ilokhwe emhlophe yeentyatyambo emhlophe, ukusuka kwi- $ 55, RenttheRunway.com
Ukuprintwa kwegolide kuyaphuma ngokuchasene nomnyama osisiseko. Oko, kudityaniswe nezinto ezibongozelayo, kuyenza le maxi imangalisayo yenye yeefes zethu zexesha lonke.
I-MSK yentsimbi-eprinti iblukwe ebomvu, $ 129, Macys.com
Isinxibo seentyatyambo seentyatyambo sondwendwe lomtshato silungele ihlobo, ngaphandle okanye emini.
Ndibonise uMumu wakho Intyatyambo hacienda maxi, ukusuka kwi- $ 45, RenttheRunway.com
Iintyatyambo zeTropiki, imikhono yekepusi kunye nokusikwa kongeza umdla kwilokhwe entle yehlobo lomtshato weendwendwe.
Uthando + Harmony ilokhwe maxi engaphambili, $ 62, NgUlObe.nl
Isinxibo sama-maxi sobukhulu obudityanisiweyo sondwendwe lomtshato silingana ngokulinganayo nenobuhle.
Ukudibanisa iNxweme Ingubo yokuprinta ka-Katy, i- $ 252, I-US.ASOS.com
Ubumnandi obuhle kunye neeruffles zobufazi zihombisa eli lokhwe lomtshato weendwendwe.
Uyilo lweASOS ilokhwe ye-maxi enesinxibo kunye ne-ruffle evulekileyo, $ 67, I-US.ASOS.com
Isinxibo esimnyama esingagxalwanga simlungele umcimbi othandekayo, kodwa le ayisiyongxaki kangako. Uya kuzifumana uphantsi komgangatho wokudanisa ngokuqinisekileyo.
Ukucacisa Isinxibo se-maxi esinqeni esinqeni, $ 70, Express.com
Le stunner ye-chic isikhumbuza ngefrock ngaphandle kokugquma kwee-20s. Intle!
IBHHLN Ukunxiba uBlaise, $ 260, Anthropologie.com
Umenyiwe kumtshato womtshato omnyama we-ultra-posh? Le yingubo.
UAlfred Sung Isinxibo sasebukhosini esingenamtya, $ 242, INkosiIngu
I-sequins emnyama kunye neslits ebekwe ngokugqibeleleyo yenza le nto ibe yingubo yokunxiba, kodwa enobungqingili, kunye nesayizi enkulu yeendwendwe zomtshato. Siyayithanda i-neckline ye-asymmetrical.
UAdrianna Papell ubungakanani obudityanisiweyo begxalaba elinye, $ 200, Macys.com
Onke amehlo aya kuba phezu kwakho ukuba ukhetha le gown intle kwaye intyatyambo yebhanti ye-bandeau.
Uyilo lweASOS Isinxibo se-satin bandeau maxi kwitshati, $ 76, I-US.ASOS.com
Ngokusongelwa ngokukhohlisa kunye nemikhono egxalabeni, le maxi yobukhulu obudibeneyo ilungile kwindlela.
IsiXeko seChic Ingubo ka-Miss Jessica maxi, $ 149, Imvu.com
Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwale lokhwe yelace kuyahlaziya. Itholakala ngobukhulu obuqhelekileyo kunye nobude obude, obunokuba nzima ukufumana kwisambatho eside kwindwendwe yomtshato.
Nxiba abemi I-blue melina lace maxi, ukusuka kwi- $ 30, RenttheRunway.com
isipho somtshakazi ngosuku lomtshato kwintombi
Jika iintloko nge-maxi ebomvu ebomvu kakhulu ngaphandle kokunqongophala kwezibongozo.
Ubukhazikhazi bokwenyani bokwenyani Ukunxiba maxi ngoncedo, $ 150, IvenkileBop.com
I-capelet ekhethekileyo kunye ne-ruffles e-gorgeous ngaba uya kuthiwa unxibe kakuhle emtshatweni.
BCBG uMax Azria Isinxibo se-fanella sokusongelwa nge-faux, $ 298, BCBG.com
Singabalandeli abakhulu beetoni zejewel kuba bobabini banesibindi kwaye bahle. Le gawuni ifumaneka incinci, ihlala ihleli, inde kwaye inokudityaniswa nobungakanani, ke iyabetha yonke into epaka ngaphandle.
UBadgley Mischka flora chiffon gown, ukusuka $ 50, RenttheRunway.com
Isinxibo eside sondwendwe lomtshato ngesiseko esimnyama ziipropos nakwezona zinto zisemthethweni.
Ilifa leMveli laseHalston ingubo eruffle, $ 395, INkosiIngu
Nokuba le lokhwe yeentyatyambo yeentyatyambo iyahamba ngokungaqhelekanga okanye ifana ngokuxhomekeke kwizixhobo ozikhethayo.
UAuguste ilebheli Isinxibo se-maxi esineentyatyambo, $ 215, NgUlObe.nl
Umqolo ovulekileyo kunye nokuqhekeza unikezela ngesibheno sesondo ngaphandle kokuya ngaphezulu.
UJenny Yoo alanna ingubo ye-chiffon evulekileyo, $ 285, Imvu.com
Isiphelo esisezantsi kakhulu sinika le maxi umdla ongezelelweyo, kwaye ikuvumela ukuba ubonise ezinye izihlangu zokubulala.
Ukucacisa Isinxibo se-maxi esine-strapless, $ 60, Express.com
Ukuhonjiswa kunye nokuhonjiswa kuphakamisa ilokhwe yeentyatyambo yeentyatyambo kulundwendwe lomtshato oluya kwimicimbi yangokuhlwa.
Uncedo ngu-Aidan Mattox Isinxibo se-sequin esimenyezelwe, $ 585, INkosiIngu
Siyayithanda i-bodice ehonjisiweyo yale ngubo ilungileyo yehlobo lomtshato weendwendwe.
Abantu abaSimahla Isinxibo sikaDaphne maxi, $ 350, FreePeople.com
Ifumaneka ngobungakanani obuthe tye kwaye obuncinci, le lokhwe ye-maxi yolundwendwe lomtshato ikhupha i-vibe emnandi yasentwasahlobo.
Imfihlo Nceda Iplaza yeplaza kimono maxi, ukusuka kwi- $ 55, RenttheRunway.com
Ngengubo ende yomtshato emfutshane ngokusesikweni, sukujonga ngaphezulu kuneli nani lomkhosi wenqanawa.
UCalvin Klein Ingubo ye-chiffon halter, $ 199, Macys.com
Isinxibo se-maxi sondwendwe lomtshato sithatha ukunqwala kumngxunya womsele ukuze ujongeke ngakumbi.
Iarhente Umsele wesilika kaMaya usonge ilokhwe enkulu, $ 595, SaksFifthAvenue.com
qengqeleka ngecole kunye charisma
iikhabhathi ezikhanyayo ezingwevu
umahluko phakathi kokuphoswa ms ms